Shaqalaha Amniga ee Maraykanka oo laga yaabo in mushahar la’aan ku dhacdo!
Home Somali News Shaqalaha Amniga ee Maraykanka oo laga yaabo in mushahar la’aan ku dhacdo!
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa Isniintii shalay hadal uu soo saaray uga digay in todobaadka soo socda ay dhici karto inaan la bixin mushaharka shaqaalaha Wasaaradda Amniga Gudaha ee Maraykanka.
Todobaadkan ayuu golaha Kongareeska Maraykanka ka doodayaa miisaaniyada Wasaaradda Amniga Gudaha ee Maraykana, waxaana dhici karta hadii Xildhibaanada isku mari waayaan ansixinta miisaaniyadaasi in si kumeel gaar ah loo xiro Wasaaradaasi muhiimka ah.
“…Arrintan waa mid khatar si toos ah ugu keenaysa dhaqaalaheena iyo amniga dalkeena…”ayuu yiri Obama oo ku adkeeyey Kongareeska inay si deg degleh u ansixiyaan miisaaniyada Wasaaradaasi.
Shaqaalaha ka cabsi qaba in mushahar la’aan ku dhacdo ayaa waxaa kamid ah shaqaalaha ka shaqeeya Amaanka Airporada iyo waaxyaha kale ee amniga gudaha Maraykanka.
Somaliland History Notes: Punjabis in Somaliland 1940-1941